LuckyMetrics: Nchọpụta Ọrụ Nchọgharị Dị Mfe Nweta | Martech Zone
Tuesday, May 28, 2013 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Nkezi gị nchịkọta ngwugwu nwere ike ịbụ ntakịrị karịa ma ọ bụrụ na ị na-anwa nyochaa arụmọrụ akwụ ụgwọ gị na mgbakwunye. LuckyMetrics bụ nchịkọta ikpo okwu na-ejikọ Google Adwords, Mgbasa ozi Bing, Clickbank, AWeber, Mailchimp na PayPal iji nye gị usoro metụrụ mkpa ị ga-eji nyochaa ma bulie ọchụchọ ịkwụ ụgwọ gị yana arụmọrụ mgbasa ozi mmekọ.
Kedu mpaghara ala ndị bara uru?
Kedu awa nke ụbọchị? Kedu ụbọchị n'izu ahụ?
Kedu isiokwu ndị ị kwesịrị ịkwụsị ịkwụsị, nke ị ga-ewelite ọnụ gị?
Mara: Anyị etinyela njikọ njikọta anyị nke LuckyMetrics na post a.